Baarlamaanada jaamacada carabta ayaa sheegay in laka hortago kala qeybsanaanta u dhaxeysa soomaalida – STAR FM SOMALIA
Baarlamaanada jaamacada carabta ayaa sheegay in laka hortago kala qeybsanaanta u dhaxeysa soomaalida
Bayaan uu soo saaray Baarlamaanka Wadamada Jaamacadda Carabta, ayaa waxaa lagu sheegay in laga hortaggo kala qaybsanaan ku timaada Somalida dhexdeeda, iyadoo la ilaalinaayo midnimada Somaliya.
Bayaankan, ayaa waxaa lagu sheegay in Jaamacadda Carabta ay garab taagan tahay Somaliya, bacdamaa ay Somaliya xubin ka tahay 22-ka wadan ee jira Dallada Jaamacadda Carabta.
Bayaanka, ayaa waxaa ku qornaa qodobo muhiim ah oo taageero wayn loogu muujiyay madax bannaanida iyo nabadgelyada Somaliya.
Qodobada Bayaanka, ayaa u qornaa:-
In laga hortaggo kala qaybsanaan Somalida dhexdeeda ah
In la xaqiijiyo, lana raadiyo midnimada iyo wadajirka Ummada Somaliyeed
In dib u heshiisiin loo sameeyo dhinacyada Somalida, si ay isugu soo dhawaadaan
In lala dagaalamo kooxaha argagaxisada iyo kooxaha kale ee diidan midnimada Somaliya
In ay muhiim tahay ilaalinta badda iyo xasiloonida Somaliya
In laga hortaggo cid kasta oo damacsan inay fara-gelin ku samayso madax bannaanida Somaliya.
Bayaankan wuxuu ku soo beegmayaa xilli xasaasi ah, waxaana xusid mudan in Kenya si xoogan loogu eedeeyay inuu damac ka soo galay qayb ka mid ah badda Somaliya. Bayaanku wuxuu hiil u yahay Somalida oo idil.
Maanta ayaa lagu wadaa in uu si rasmi ah ufurmo shirka wada tashiga qaran ee magaalada kismaayo
Madaxweynaha Somaliya oo gaaray Magaalada Kismaayo